किन हुन्छ एलर्जी ? के छ उपचार ? – Wire Nepal
काठमाडौं: सामान्य अवस्थामा रहेको मानिसको शरीर कहिलेकाही बैचैन हुन्छ। हाच्छिँउ आउँछ। शरीर चिलाउँछ। डा आशिष खनालकाअनुसार मेडिकल भाषामा त्यसलाई नै एलर्जी भनिन्छ। डा खनालकाअनुसार हामीले खाएको खाना तथा वातावरणले आन्तरिक वा बाह्य रुपमा प्रतिक्रिया भई शरीरमा बेचैन हुनु नै एलर्जी हो।
‘एलर्जी हुनलाई कुनै कारण चाहिन्न। जुन सुकैबेला शरीरका जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘एलर्जी क्षणिक समस्या हो। कसैलाई बिहान उठ्ने वित्तिकै हाच्छ्युँ आउँछ। कसैलाई कुनै औषधी खाँदा वा लगाउँदा एलर्जी हुन्छ। कसैलाई धुवाले एलर्जी हुन्छ भने कसैलाई पानीले पनि एलर्जी हुन्छ। त्यस्तै कस्मेटिक सामानको प्रयोगले पनि एलर्जी हुन्छ।’
सामान्य जस्तो देखिने कतिपय एलर्जी निकै घातक हुने डा खनाल बताउँछन्। ‘एलर्जीकै कारण श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने वा छाती पोल्नेसम्म हुन्छ। यस्तो बेला स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ।’ खनालले भने, ‘बारुला, अरिंगाल, माकुरालगायतका कीरा र झिँगाले टोक्दा सावधान रहनुपर्छ।’
प्रोटिनका कारणले पनि शरीरमा एलर्जी हुन्छ। कतिपय मानिसहरुलाई बदाम, अन्डा, गहुँको पिठोबाट बनेका परिकारले समेत एलर्जी हुने गर्छ।
औषधीले शरीरभित्र सिर्जना गर्ने रासायनिक परिवर्तन वा औषधीप्रति शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाले पनि शरीरमा एलर्जी हुने खनाल बताउँछन्। यो एलर्जी निकै घातक हुने खनालको कथन छ।
धुलोको कारण कतिपय मानिसहरुलाई एलर्जी हुने खनाल बताउँछन। खोकी लाग्ने, घाँटी खसखस हुने नै धुलोको एलर्जी हो। धुलोको एलर्जी अन्य एलर्जीभन्दा खतरनाक हुन्छ।
चिसो मौसम सुरु हुँदा नाकबाट पानी बग्ने, निरन्तर हाछिउ आउने गर्छ। त्यस्तै गर्मी मौसममा आँखा रातो हुने, अनुहारमा डाबर आउने, छालाको कत्ला परिवर्तन हुने गर्छ। यस्तो एलर्जी मौसमी एलर्जी हो।
घर पालुवा जनावरका प्वाँख, छाला र नंग्राबाट कतिपय मानिसहरुलाई एलर्जी हुन्छ। जनावरको शरीरमा टाँसिएको धुलो र तिनीहरुको गन्धले मानिसलाई टाउको दुख्ने, बान्ता आउने र रिंगटा लाग्ने गर्छ।
श्वास फेर्न गाह्रो हुने, नाकबाट पानी बग्ने, आँखा सुन्निने, आँखाबाट आँसु आउने, रिंगटा लाग्ने, टाउको र घाँटी दुख्ने र नाक थुनिने नै एलर्जीको लक्षण हो।
एलर्जी हुदाँ श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, खोकी लाग्ने, हाच्छ्युँ आउने पनि हुन्छ। एलर्जीकै कारण मुख र घाँटी दुख्ने तथा सुन्निने, नपच्ने, बान्ता आउने, रिंगटा लाग्ने, पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने हुन्छ।
खनालको अनुसार एलर्जीको कुनै औषधि छैन। एलर्जी हुन वस्तुहरुबाट बच्न सके एलर्जी नै नहुने खनालको कथन छ। एलर्जी भइ हालेमा चिकित्सककोमा जानु पर्छ। जथाभावी औषधि खानु नहुने उनको कथन छ।
PREVIOUS POST Previous post: किन दुख्छ ढाड? कसरी होला निको?
NEXT POST Next post: कम्प्युटर तथा मोबाइल चलाउनेको आँखामा देखिने ‘कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम’ के हो?